नेपाल प्रहरीमा ३ जना मात्र एआइजी, क–कसको चम्किदैछ भाग्य ? | My News Nepal
नेपाल प्रहरीमा ३ जना मात्र एआइजी, क–कसको चम्किदैछ भाग्य ?
काठमाडौं । सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याउँदै नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ३ जना बनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जना मात्र एआईजी बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि, गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी घटाएर ५ जना बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्राविधिकतर्फका एआईजी तर्थ पूर्व कार्यवहाक आईजीपी दिनेशचन्द्र पोखरेल कार्यरत रहेको अवस्थामा अब प्रहरीमा दुई जना मात्र एआईजीमा बढुवा हुने छन् । यसअघि प्रहरीमा ५ एआईजी मात्र राख्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहि मस्यौदालाई निर्णयका लागि गृहले मन्त्रीपरिषदमा लैजाँदा आज उक्त मस्यौदामा परिवर्तन गरी तीन जनालाई मात्र एआईजी बनाउने निर्णय भएको हो ।
सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षकमा बढुवासँगै रिक्त एआईजी पदका लागि १० जना डिआईजी मुख्य प्रत्यासीका रुपमा छन्। सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट डिआइजी रमेशप्रसाद खरेलले भने राजीनामा दिएका थिए ।
यस्तै ३० असार २०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छबिलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द समेत नियमावली योग्यताका आधारमा एआईजीका दावेदार हुन्। तर, जोशी, उत्तम कार्की र पबन खरेल असारको अन्तिमसम्म बढुवा भएनन् भने घर जानेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको छ । अब त्यहाँ दुई जना मात्र एआईजी हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले तीन एआईजी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल सशस्त्र प्रहरीमा ८ जना बहालवाला छन् । एक समय ११ जनासम्म्म पुगेका थिए ।